Ny zazavavy tsy misy maha-izy azy: ny Maha-zaza faharoa ao Shina - CNN
Ny zazavavy tsy misy maha-izy azy: ny Maha-zaza faharoa ao Shina — CNN
Na dia izy no mahazo famatsiana ara-pahasalamana fa ny ankamaroan’ny tanàna ny mponina amoron-drano ankafizo.
‘Izy nitandrina mangataka ahy ny antony dia tsy afaka mandeha any an-tsekoly, nahoana izy no tsy mety raha ny hafa rehetra atao, ary tsy noeritreretiko mihitsy ny fomba hamaly azy afa-tsy ny mamerimberina fa izy dia zaza faharoa, reniny Bai Exiling, teo aloha ny orinasa ny mpiasa, dia nilaza tamin’ny CNN avy ny maotina niteraka-biriky an-trano.
Ny reniny nianjera tampoka bevohoka
Na dia eo aza ny loza mety hitranga izy, dia nandeha nialoha ny fitondrana vohoka. Ny fahazazana bout ny lefakozatra simba ny tongony, ary izy te ho manana ny ankizy iray hafa mba hikarakara ny tamin’ny taona taloha. Shina ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana lalàna dia mitaky ny ankamaroan’ny fianakaviana monina ao amin’ny tanàn-dehibe ny manana ny ankizy iray. Ny politika dia looser any amin’ny faritra ambanivohitra ary koa ho skirted ireo izay manam-bola mba handoavana ny maso-manondraka ny lamandy. Fa Li ny ray aman-dreny dia tsy afaka mandoa ny, yuan (dollars) ho faty sy ny manam-pahefana nandà Li azy ao an-tokantrano taratasy fisoratana anarana, na ‘hukou,’ izay zo tanàna ny mponina ny famatsiana ny fahasalamana, ny trano fonenana sy ny fanabeazana. Ny politikan’ny zaza tokana, na dia nitehaka tamin’ny maro ho fampitonena ny Shina ny fitomboan’ny mponina, dia efa voakiana mafy tokoa noho ny vokatry ny tany ny Sasany milaza ny mpitsikera fa ny lalàna maharary Shina ny zokiolona, izay matetika miantehitra amin’ny zanany ho fanohanana amin’ny efa antitra, ary na dia manery fitomboana ara-toekarena araka ny fiàsan’ny taona mponina manomboka mandà, Shina ny masoivohom-baovaom-panjakana, hoy i Shina dia deliberating sasatra ny politika mba mamela ny mpivady, izay ray aman-dreny iray dia zaza tokana, manana zanaka roa. Amin’izao fotoana izao, na ny ray aman-dreny dia tsy maintsy ho tokana ny ankizy mba ho afaka ho an’ny zaza faharoa. ‘Izahay dia nanana fanantenana fa ny fampitsaharana ny politikan’ny zaza tokana ho ela dia ho raisina ho mpikambana, ny’ mpahay toe-karena Ting Lu nanoratra tao amin’ny aogositra tatitra ho an’ny fampiasam-bola trano Bank of America Merrill Lynch. Nilaza izy ireo fa hanavao ny telo-polo taona ny antitra politika no mety hitranga rehefa fototra efatra andro fanangonana ny malaza indrindra ao Shina ireo mpitarika ny Antoko Kaominista fahatelo plenum izay nanomboka tamin’ny asabotsy. Ny fianakaviany no nanao fampielezan-kevitra nitsahatra ho azy-hanana ny ‘hukou’ antontan-taratasy izy ireo mino fa izy no mitondra ny lohateny hoe ny mba hiaina ny fiainana ara-dalàna. Izy ireo no nangataka an-toerana sy ny firenena ireo manampahefana sy ireo hanohy ny raharaha amin’ny alalan’ny rafitra ara-dalàna, saingy, hatramin’izao, tsy nisy vokany.
‘Li Xu ny ray sy izaho dia voadaroka tamin-kerisetra
Izaho tsy hiala eo am-pandriana ho an’ireo efa ho roa volana, ary ny rahavaviny dia efa mba hikarakara ahy, hoy Bai. Tamin’ny volana septambra, ny fianakaviana nandray mahita fa ny raharaha ho ren ny ao Beijing Avo Olona ny Fitsarana, nefa izy ireo dia tsy nanana fanantenana fa ity raharaha ity dia ho tapa-kevitra ny famindram-po. Nilaza ny mpitondra tenin’ny fitsarana dia nilaza tamin’ny CNN fa ny raharaha amin’izao fotoana izao dia efa nandinika sy ny fanambarana dia hatao amin’ny fotoany. Nisy roa mety hitranga na ny raharaha dia ho retried, na ny tany am-boalohany nanamafy ny didim-pitsarana, hoy ny mpitondra tenin’ny. ‘Ny hany zavatra isika, te-dia ny fanazavana ny antony mahatonga ny vavy tsy manana ‘hukou’, ary tsy misy mihoatra, hoy i Li ny ray, Li Hongwu. Ao, Li nanomboka ny bilaogy bitika ao amin’ny Weibo mitovy amin’ny Twitter ao Shina. Manantena izy fa ny fanatrehany an-tserasera dia fanampiana amin’ny fisarihana ny saina ny fahoriany, ary tiany ny fampiasana ny sehatra mba hanombohana kokoa ny fiovàna amin’ny tsara ho an’ny olona ao an-toerana. ‘Hataoko hankafy ny fianarana ny lalàna, ary manantena aho afaka mampiasa izany mba hanampy ireo olona hafa, fa amin’izao fotoana izao, efa mba ho azo ampiharina sy hamaha ny tena maika olana ho lasa ara-dalàna ny faharoa zaza, hoy izy. ‘Aho indraindray ny fisalasalana na ny zavatra ataoko dia tsy hanova na inona na inona, fa mino aho fa izaho no mitondra eo,’ hoy izy, nanako ny anaran ny bilaogy Kely Xu tsy kivy
← Mijery mivantana ny fanaraha-maso an-tserasera IP fakan-tsary ao Shina